Namuhla, okwenza gxuma okuyingozi, noma bamane bathatheka ngu emidlalweni eyingozi asikwazi nje isuse konke kusuka ngaphandle bese ususa i- "amehlo ekstremalschiki 'by yibhande lasebunzini phakathi, ingalo. Noma abantu entsha ngeke bathi kungcono ukubona kanye ukuthi ukuzwa kayikhulu. Futhi yokudlulisela imizwa futhi emizweni kangcono ividyo khamera, ngcono.
Lokhu camcoder ikuvumela ukuba sibonise hhayi kuphela isinyathelo, kodwa futhi ukuthi lingakanani ijubane lokuya, isimo sezwe lapho kwenzeka, kanye izitobhi nezindawo. Lungiselela ikhamera, ungakwazi ukudubula ku isinqumo ongaphakeme, futhi Full HD vidiyo. Inguqulo entsha ye-ikhamera Ubuye GPS-umamukeli, okuvumela ukuba kutholakale indawo futhi iqaphe ukuhamba into. Ukubeka lokhu ngokusemthethweni lobunikazi ikhamera futhi likuvumela uyibambe ngisho ukugibela indiza. Nale ikhamera, ungabona ukuthi indiza futhi kude kangakanani ngaphezu kolwandle ukhona, kungakhathaliseki ukuthi flying phezu ukushibilika eqhweni ezintabeni noma gxuma parachute.
GoPro Hero2 Outdoor-Edishini
GoPro isiqophi amakhamera kukhona ethandwa kakhulu futhi izinga lapho ngokudubula izikhathi kakhulu. Lisetshenziswa njengendlela abadlali professional, futhi abalandeli ngokudubula nge ukudluliselwa ezinhle isithombe futhi umsindo. GoPro Hero2 Outdoor-Edishini kubhekwa kokuhle kunakho konke komhlambi wonke imodeli ububanzi, liyakwazi ukukhipha isithombe eliphezulu kokuba engela ukubukela 170 degrees, ebe egcina izinga 1080p, thatha izithombe ngesikhathi esingaba 10 ozimele / yesibili 11Mpiks isixazululo.
Okuhambisana yisigqoko, le khamera Kuphendula izinga okusezingeni umbala izithombe ngesikhathi esisodwa futhi likuvumela ukuyibuka. Ovundlile Color LCD - 1.5 amayintshi. Ikhamera has a remote control, ne ibanga esiphezulu - 3 metres. Kodwa musa ukwethemba kwalo kunoma ubani, ngaphandle uma ufuna e sikhathi esibaluleke kakhulu ikhamera elapha STOPe.
Oregon Scientific ATC 9k HD
Bawo yaleli ikhamera cishe akunakwenzeka ukuthola ngoba yonke imisebenzi edingekayo: isibonisi umbala, elawulwa kude, ngisho eyakhelwe inzwa G-inzwa. Ngenxa wakhe, ungathola hhayi kuphela kwekhwalithi ephezulu yevidiyo, kodwa futhi isimo elikhulu, sibonga umzimba omuhle, ehlotshiswe imivimbo yellow.
Kufinyeta, singaphetha kahle ukuthi ochwepheshe digital isiqophi amakhamera zikuvumela ukudubula kwekhwalithi ephezulu yevidiyo 1920h1080px zisekelwa imemori khadi, inani elikhulu izesekeli, nezinamathiselo. izindleko sawo silinganiselwa zokhahlamba kusuka $ 300 500 futhi ngenxa yalokho ngokuyinhloko asetshenziswa ochwepheshe. Abanye ongazenzela zona uyisipho esikhulu futhi bethola facets eyengeziwe kwezinye izinto zokuzilibazisa kakhulu.
"Simca" I-tablet. Izimali MTS futhi "megaphone"
I-Tablet Lenovo IdeaTab S6000: incazelo, izici nobabili. ithebhulethi Firmware
Ukubamba for ekubambeni walleye ebusika ngezandla
Kuvele Imibuzo ezithakazelisayo izimpendulo mayelana ekwindla
Indlela swaddle ingane ngendlela efanele kwesokudla?
Kungakhathaliseki umuntu sina ujabule?
Abahumushi entsha phezu Teply Stan
Indlela ukulungiselela iwayini itiye rose?
"Amelotex" (gel): yokusetshenziswa
Impesheni ikhadi Komphakathi. Sberbank ikhadi umhlalaphansi